नेपालमा राधे रिलिजको सर्वत्र विरोध : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed नेपालमा राधे रिलिजको सर्वत्र विरोध
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म राधे बिहीबारबाट विश्वसँगै नेपालमा पनि नेट टिभी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत रिलिज भयो । यो भारतीय फिल्म राधेको नेपालमा सेन्सर भएको छैन । सेन्सर बिना नै नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज गरिएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
यो फिल्लाई नेपालमा गोपीकृष्ण मुभिजले वितरण गरेको छ । फिल्म हलमा रिलिज गर्नु नपर्ने भएपछि गोपीकृष्णले सेन्सर गर्नु नपर्ला भनेर यहाँको डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज गरिएको जनाएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले भारतीय फिल्म राधेलाई बिना सेन्सर नै यहाँका नेट टिभी, डिस होमको फिल्म च्यानलगायतमा रिलिज गरिएको भन्दै सेन्सरका लागि बिहीबार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठायो । सो पत्रप्रति मन्त्रालयको ध्यान गएको छ । फिल्म राधेलाई सेन्सर गरेर मात्र नेपालमा प्रदर्शन गर्नका लागि सञ्चार मान्त्रालयले शुक्रबार यो फिल्मको नेपाल वितरक गोपीकृष्ण मुभिजलाई पत्र काटेको छ । मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि गोपीकृष्ण मुभिज सो फिल्मको सेन्सर तयारीमा शुक्रबार दिउँसोबाट जुटेको हो ।
नेपालमा नेपाली चलचित्रलाई हलदेखि टेलिभिजन च्यानलमा रिलिज गर्दा समेत सेन्सर गर्ने नियम छ । तर, विदेशी सिनेमा सेन्सर बिना चलाएपछि सबैतिरबाट विरोध भएको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले राजधानीलाई बताए । फिल्म राधेलाई नेपालमा सेन्सर नै नगरी नेपालकै डिजिटल प्लेटफर्म र टेलिभिजन च्यानलबाट रिलिज गरिएको भन्दै बिहीबार बोर्डमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीको आधारमा आफूलाई यो फिल्मलाई सेन्सर गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुरोधपत्र पठाएको पनि दाहालले राजधानीलाई बताए ।
फिल्म राधेलाई विदेशको ओटिटी प्लेटफर्म तथा च्यानलबाट रिलिज गरेर नेपालमा हेरिएको भए सेन्सर गर्नुपर्ने थिएन । तर, नेपालकै टेलिभिजन र नेपालबाटै सञ्चालिन नेट टिभीबाट रिलिज गरिएकाले यसको सेन्सर गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । यसअघि नेपालमा निर्माण भएका कतीपय चलचित्र हलमा रिलिज हुन नसके पनि डिसहोमको फिल्म च्यानल, अन्य टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्मबाट रिलिज गर्नका लागि सम्बन्धित फिल्मले सेन्सरको प्रक्रिया पूरा गरेको थुप्रै उदाहरण रहेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताए ।
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा चलचित्र निर्माता, अभिनेता नवल खड्काले शुक्रबार एक विज्ञप्ति नै जारी गरी नेपालमा सेन्सर नै नगरी चलचित्र राधे रिलिज गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे । हरेक नेपाली फिल्मलाई सेन्सर बिना हल मात्र नभएर टेलिभिजन तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि रिलिज गर्न नदिने सरकारको नियम भएको उनले स्मरण गराए । तर, केका आधारमा सलमान खानको फिल्म राधेलाई सेन्सर बिना नेपालका टेलिभिजन च्यानलदेखि डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत रिलिज गरिएको भनेर उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । कि त सबै फिल्मको सेन्सर हटाइउनु पर्ने कि सबैलाई सेन्सर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
यस्तै नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्वअध्यक्ष एवं चलचित्र निर्देशक केपी पाठकले पनि फिल्म रोधेलाई नेपालमा बिना सेन्सर रिलिज गरेकोमा त्यसको विरोध गरेका छन् । विदेशी फिल्म नेपालमा सेन्सर नै नगरी यहाँमा टेलिभिजन च्यानल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट रिलिज गर्नु गैरकानुनी कार्य भएको उनको जिकिर छ ।
निर्देशक मनोज पण्डितले पनि बिना सेन्सर नेपालमा राधे रिलिज हुन्छ भने अरू नेपाली फिल्म पनि अब सेन्सर बिना नेपालमा रिलिज गर्न पाउनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाएका छन् । यसरी विभिन्न नेपाली सिनेकर्मीले सेन्सर बिना राधेको नेपाल रिलिजप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । यसतर्फ सरकारले ध्यान गएकाले फिल्म राधेलाई अब सेन्सर गर्न लगाएर मात्र प्रदर्शन गर्न दिने सञ्चार मान्त्रालले जनाएको छ ।
अभिनेता सलमान खानले फिल्म राधेलाई इदको अवसर पारेर बिहीबारबाट विश्व भर विभिन्न देशका ओटिटी प्लेटफर्मबाट रिलिज गरेका हुन् । कोभिडका कारण यो फिल्म भारत, नेपाललगायत विभिन्न देशका सिनेमा हलमा यतिबेला रिलिज हुन सकेको छैन ।
काल बन्दै पोखरी : एक वर्षमा १२ बालबालिकासहित २२ जनाको डुबेर मृत्यु
एमके माझी -
सप्तरी, राजविराज । सप्तरीमा पोखरीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या एकासी बढेको छ । जेठ महिनामा मात्र ४ जनाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ ।...
कोरोना संक्रमणबाट आमाकाे मृत्यु भएको चार दिनपछि छोराको मृत्यु
उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका– ७ बेल्टार बजारमा कोभिड १९ को संक्रमणबाट ४ दिनको अन्तरालमा आमा छोराको मृत्यु भएको छ । बेल्टार बजारको प्रतिष्ठित...
केही दिनयता घट्दै गम्भीर संक्रमित
काठमाडौं । कारोना खोप लगाउनेक्रम बढ्दै गर्दा गम्भीर संक्रमित भर्ना दरमा पनि केही कमी आएको पाइएको छ । यद्यपि, केही दिनयता संक्रमित संख्या घटे...
निषेधाज्ञामा रोकिएन राजेन्द्रको संगीत सिर्जना
काठमाडौं । पछिल्लो निषेधाज्ञामा पनि राजेन्द्र बजगाईलाई खाली बस्नुपरेको छैन । गत साता मात्रै संगीतकार बजगाईंले प्रमोद खरेलको स्वरमा नयाँ गीत आमा...रेकर्ड गरेका छन्...
कालोबजारीले बजारमा कृत्रिम अभाव
काठमाडौं । पछिल्लो समय आमउपभोक्ता कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा रहेको मौका छोपी व्यापारीले दैनिक उपभोग्यवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका छन् । त्यस्ता व्यापारीले...
छायांकन नरोकेपछि प्रहरीको हस्तक्षेप
Not-to-be-missed डब्बु क्षत्री - August 17, 2020 0
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनलाई उलंघन गर्दै धमाधम चलचित्र, टेली चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोको छायांकन गरिएपछि यस्तो छायांकनमा प्रहरीले रोक लगाएको छ...
सन् २०२५ मा पाँचाैं र १० वर्षमा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने भारतको लक्ष्य
अर्थ डब्बु क्षत्री - December 26, 2020 0
नयाँ दिल्ली । छिमेकी सन् २०२५ मा पाँचाैं र १० वर्षमा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मुलुक राजनीतिक र आर्थिक...
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पुस ७ मा
राजनीति डब्बु क्षत्री - December 20, 2020 0
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही पुस ७ गते बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अपराह्न १ बजे बस्ने बैठकमा मुलुकको पछिल्लो...
नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेसको मौनता
Breaking News महेश्वर गौतम - March 20, 2021 0
काठमाडौं ।नयाँ सरकार गठनका लागि दलीय गठबन्धन बनाउने विषयमा सक्रिय बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एकाएक मौन देखिएको छ । कांग्रेसले स्पष्ट धारणा नदिँदा...
के फोटोग्राफिक मेमोरी सम्भव छ ?
बिचार डब्बु क्षत्री - August 6, 2020 0
फोटोग्राफिक मेमोरी । एकपटक हेरेको, पढेको तथा सुनेको भरमा हुबहु जस्ताको तस्तै स्मरण गर्ने क्षमता । यस क्षमताका बारेमा अहिले मात्र होइन, उहिलेदेखि नै...
प्रदेश ३ डब्बु क्षत्री - November 13, 2020 0
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् । कोभिड­१९ बाट धराशायी...
१५औं वार्षिक योजनाले ल्याएको आशा र उमंग
बिचार डब्बु क्षत्री - March 11, 2020 0
विश्वमा मार्सल प्लानबाट आरम्भ भएको आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन नेपालमा भने २०१३ सालबाट आरम्भ भएको हो । साविकमा सामान्यतः पाँच वर्षका लागि आवधिक...
Breaking News डब्बु क्षत्री - February 23, 2020 0
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ६९ औँ जन्मोत्सव मनाउन आठराई गाउँपालिका वडा नं ४ इवास्थित आफ्नो जन्मघरमा पुगेका छन् ।...
दिदिबहिनी कप राष्ट्रिय महिला भलिबल
खेल डब्बु क्षत्री - February 18, 2020 0
बेनी । १३औं गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला महोत्सवको अवसरमा चौथो दिदिबहिनी कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता बुधबारदेखि पर्वतको बेनीमा सुरु हुने भएको छ...
दिवाकरलाल अमात्य - June 9, 2021
चितवनमा तेस्रो चरणको कोरोनाविरुद्धको खोप जेठ २५ र २६ गते
सिल्भा ब्राजिली टोलीमा
एजेन्सी - June 11, 2021